Izinwele Zowesifazane Wezinwele Nezinsizakalo Zokuhlobisa "Isitayela Nemfashini"
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-53)
Okhanda izinwele Zomfazi e Izinsizakalo Zokuhlobisa inembile futhi icophelela: yilokhu isikhungo ekuhlinzeka kona "Isitayela Nemfashini"ka UMichelangelo Caliri, enhliziyweni Messina, endaweni entofontofo neyamukelekayo. I-Stylist yezinwele e Umeluleki wezithombe unekhono kakhulu, zinakekele ezakho bheka nokwakho capelli ngezindlela zokwelapha ubuhle nemikhiqizo yobungcweti.
Isinwele seMan Woman nezinsizakalo Zokuhlobisa "Isitayela Nemfashini" - Umeluleki Wezithombe eMessina
I-Stylist yezinwele e Umeluleki wezithombe ngamakhono amahle wokudala, UMichelangelo Caliri ungumqambi wempumelelo we "Isitayela Nemfashini", maphakathi ne izinzwa enhliziyweni yedolobha I-Messina. Ukwemukela endaweni entofontofo, ukunaka imininingwane ukubeka amakhasimende akhululeke futhi anikeze izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme. Lapha, UMichelangelo Caliri uzokunakekela okwakho bheka kumuntu wokuqala, wasizwa yiqembu Izinwele Indoda Yomuntu e I-Stylist yezinwele abasebenzisa imikhiqizo yobungcweti nezindlela ezithile zokwelapha, ezilungele zonke izinhlobo zesidingo.
"Isitayela Nemfashini" Izinsizakalo Zokuhlobisa eMessina - Ingqikithi Yokubuka kanye Nezindlela Ezintsha Zezinwele
Uzalelwe i-salon Izinwele e I-Stylist yezinwele, Isitayela Nemfashini ngokuhamba kweminyaka iye yandisa izindawo zayo zobuchwepheshe ngokungeza izinsizakalo ezinembile nezintsha Ama-aesthetics. Ngaphezu kokuhlinzeka ngezinsizakalo zakudala zokusika - imibala - isitayela - intshebe, kulandela imfashini nenkambiso ehlongozwayo unyaka nonyaka, izinsizakalo eziningi nezinembile ziyatholakala. I-Estetica ezifana: i-manicure, i-pedicure i-aesthetics, Ukulungisa Ubuciko be-Nail e Ukwakhiwa kabusha kwe-Nail. Lokhu kuvuse ukwazisa okuhle kubantu abasha baseMessina nasezindaweni ezizungezile, okuthi ngamakhilomitha ambalwa aqinisekisa ukuthi: HLONIPHA I-HAIR - IZINHLOBO ZAMAKHONO - ISITOLO - STYLE - IMIKHIQIZO YOKUQONDA - IQHAWU LOKUTHENGA LOKUQALA nezinsizakalo ezingama-360 degree. Ukunakekelwa, hhayi onkulunkulu kuphela capelli kepha ngenhlala-kahle yomuntu, kuyisici esinqumayo Isitayela Nemfashini bahlonishwe ngokucophelela bobabili abalungisa izinwele oyinikezayo beauticians yalesi sikhungo, sibonga ukusetshenziswa kwemikhiqizo yemvelo yezinga eliphakeme kakhulu lochwepheshe kanye nomugqa ophelele wezindlela ezithile zokwelapha eziqinisekisa imiphumela ephezulu yekhasimende.
Izinwele zesitayela seMan Man neFashini eMessina - Isitayela Sakho
Ngenxa yolwazi olutholwe ngokuhamba kweminyaka Isitayela Nemfashini uzuze amakhono aphezulu wephrofayili okwenze ukuthi awine udumo lwamakhasimende akhe kanye nozakwabo futhi kumenze iphuzu eliyinqobo lokukhonjwa kwiZone ngemisebenzi yezinsizakalo I-Stylist yezinwele kwabesilisa nabesifazane. Isithunzi sakhe sikhule ngokuhamba kweminyaka, okwanele ukumtholela igama lesidlaliso "Isitayela sezinwele".
Inikezelwe kulabo abathanda ukunakekela isithombe sabo, belandela zombili izinkontileka futhi ezinemfashini, kuhloswe kulabo abafuna ochwepheshe abanohlonze abanakekela impilo yabo izinwele nokubukeka ngokuphelele.
Ukwakha Amabhulukwe Akwenziwe kabusha Nezitayela Zezitayela - Isitayela Nemfashini zicabanga ngayo yonke into
Kwabesifazane, ngaphezu kokunakekela ezabo capelli, bazifunela okungcono kakhulu izipikili, bangathembela esikhungweni ngokuzethemba okukhulu. Phakathi kwemisebenzi eminingi ye I-Estetica, lo Ubuciko be-Nail futhi i Ukwakhiwa kabusha kwe-Nail bakha amandla esitolo, ngenxa yekhono nobuciko obukhulu be beauticians wePhakathi. Inamandla yokuba khona endaweni ende futhi ibonga ikhasimende elihlanganisiwe "Isitayela Nemfashini" bekulokhu kukwazi ukulondolozwa kwephrofayili ephezulu yokusebenza, nakho okukubeka ekusebenzeni kwayo Abasanda kushada enikezela ngezinsizakalo eziphelele ze Izitayela zezinwele e Ukubonisana ngezithombe, ukuze kube Omakoti ukuthi Abasanda kushada bangaziveza bangenasici ngosuku lwabo Umshado. Ukuhlala unamathele kusiko kepha unaka ekwakheni, kulwanelisa ngokuphelele abasebenzisi abahlukahlukene abamukela abantu bayo yonke iminyaka nezigaba.
Ikheli: Nge-Catania, 116
Ucingo: 090 2921755
Umakhala ekhukhwini: 388 8035580
Inombolo ye-VAT: 02978770838